Dagaalo lagu jabiyey ciidamada cadowga iyoobiya.
Dadwayne ciidammada cadowgu laayeen iyo kuwa ay xidhxidheen
Magaalooyin ciidammada gumaysigu gubeen .
Jaaliyadaha Ogadenya ee K/Afrika iyo Sweden oo banaanbax balaadhan qabtay.
Dood dhexmartay safiirka itoobiya u fadhiya Sweden iyo gudoomiyaha jaaliyada ogadenya ee Sweden.
Dagaalo lagu jabiyey ciidamada cadowga iyoobiya
Wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadenya ayaa noo soo sheegay dagaallo dhawr ah oo lagu jabiyay ciidammada gumaysiga Itooboiya, kuwaasoo ka dhacay meelo kala duwan oo Ogaadeeny ak mid ah. Dagaaklkadaasi waxay u dheceen sidatan:
17/07/07 dagaal CWXO iyo kuwa gumasysiga Itoobiya ku dhex maray Yoocaale waxaa ciidammada saama la-luudka ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 15 askari.
19/07/07 dagaal sidoo kale ka dhacay Afwayne, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga Itoobiya loogu gaystay khasare ba�an oon faahfaahintiisa la haynin.
20/07/07 Xero-Jabhad, oo u dhaxaysa Wardheer iyo Walwaal, waxaa ciidammada gumaysiga Itoobiya lagaga gubay baabuur ay ciidammo saarnaayeen, waxaan ahalkaas ku baaba�ay baabuurkii iyo wixii saarnaa oo dhan. Ciidammada halkaas gumaysiga kaga dhintay ayaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 60 askari. Waxaa sidoo kale isla hawlgalkaas burbur ba�an loogu gaystay baabuur kale oo ciidammada Itoobiya wateen, kaasoo loo gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
Ciidammada gumaysiga Itoobiya ayaa meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah ku dilay dadwayne rayad ah oon waxba galabsanin. Waxay sidoo kale gubeen tuulooyin badan oo ka tirsan gobolka Doollo.
09/07/07 waxay ciidammada cadowgu ku dileen magaalada Dhagaxbuur nin lagu magacaabo Khadar Aaden.�
14/07/07 waxay ciidammada cadowgu sidoo kale La-helow ku dileen 3 nin oo shacab ah, waxaana magaciisa helnay Deeq Muuse oo kaliya.
17/07/07 waxay ciidammada gumaysigu ku dileen Balliga Xodayo seddex nin oo shacab ah, waxayna kala yihiin:
1- Qanbi Dige
2- Dalab Maxamed Sulub iyo
3- Cabdi Faarax Gaacood. Seddexda ninba waa rag waawayn oo qiyaastii 70ka kor u dhaafay.
18/07/07 waxay ciidammada cadowgu dileen seddex nin oo shacab ah oo kala ah;
1- Faarax Maxamed Sulub
2- Yuusuf Dige Cali iyo
3- Cabdi Faarax Daa�uud
19/07/07 Afwayne, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxay ciidammada cadowgu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Khadar Axmed Food
2- C/llaahi Aw Maxamuud
3- Khaliif Daa�uud iyo
4- Xuseen Wali Cabdi-dheere
12/07/07 waxaa la waayay meel la geeyay labo ruux oo ka mid ah dadkii ku xidhxidhnaa magaalada Dhagaxbuur, waxayna kala yihiin;
1- Maxamuud C/raxmaan iyo
2- Faseex Yuusuf
10/07/07 waxay ciidammada cadowgu magaalada Qabridaharre ku xidhxidheen oo aan ilaa iyo hadda la ogayn meesha ay geeyeen 3 qof oo rayad ah, waxayna kala yihiin;
1- Tajoobe Cali Axmed
2- Iyo labo gabdhood oo Ilma Xirsi Carab ah.
16/07/07 ciidammada cadowga ayaa 30 Kiish oo raashiin ah magaalada Dhagaxbuur kaga dhacay nin lagu magacaabo C/llaahi Cabdi Sagal.
Magaalooyin ciidammada gumaysigu gubeen
Wararka ka imanaya gobolka Doollo ee dalka Ogaadeenya yaaa sheegaya in markii ay taariikhdu ahayd 17/07/07 ay ciidammada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya gubeen tuulooyin badan oo ka tirsan gobolka Doollo, kuwaasoo ay ku gubeen wixii hanti ahayd ee taallay, isla markaana ay dadwaynihii degganaa ku amareen inay meelo kale u guuraan. Tuulooyinka uu cadowgu gubay waxay kala yihiin;
1- Tuula-wacdi, oo 15 km dhinaca woqooyi ka xigta magaalada Wardheer
2- Jinnoole, oo iyadun 17 km woqooyi k xigta magaalada Wardheer
3- Caado, oo iyadun 42 km dhinaca woqooyi galbeed ka xigta magaalada Wardheer
4- Balli-garabey, oo 14 km koonfur bari ka xigta magaalada Dannood
5- Iyo Arraweelo oo iyadu nawaaxigaas ku taalla.
Isla 17/07/07 waxay ciidammada cadowgu bililiqaysteen oo rarteen wixii hanti ahaa ee taallay magaalooyinka Qorile iyo Marsin, oo isla nawaaxigaas ku yaalla. Ciidammada cadowgu waxay sidoo kale gubeen wixii Aqallo ahaa ee ku yaallay nawaaxiga Xodayo, Taalloole iyo Dundumo-cad.
07/07/07 waxay ciidammada cadowgu 7 Aqal ku gubeen Isku-dhoonley, iyadoo wixii hanti ahaa ee Aqalladaas dhex yaallay ay ku gubteen. Reeraha Aqalladaas lehaana waxaa oday u ah Maxamed Aaden Cismaan.
Bannaanbaxyo lagu sameeyay Koonfur Afrika iyo Sewdan
Jaaliyadda Ogaadeenya ee wadanka Koonfur Afrika ayaa maalintii Jimcaha ee July 20, 2007 qabatey banaanbax aad u ballaadhan oo ka dhan ah xadgudubyada bani'aadamnimada ka baxsan ee ay xukuumada Itoobiya ka wado dalka Ogaadeenya.
Bannaanbaxan, oo ay ka qayb qaateen dadwayne ay tiradoodu ka badan tahay 500 oo qof, waxaa lagu qabtay xafiiska madaxwaynaha Koonfur Afrika hortiisa.
Waxaa fagaarihii bannaanbaxa ka hadley aqoonyahanno kala duwan, kuwaasoo uu ka mid ahaa aqoonyahan Koonfur Afrika u dhashay oo lagu magacaabo Dr Cunar Dikok, kaasoo tilmaamay in arrinta Ogaadeenya ay tahay gundhigga dhibaatada Geeska Afrika ka taagan. Wuxuu sidoo kale caddeeyay in xukuumada Itoobiya ay si cad ugu tumatay xeerar caalamiga ah oo dhan.
Waxaa isaguna bannaanbaxayaasha la hadlay wakiil ka socda xafiiska madaxwaynaha, kaasoo la guddoonsiiyay warqad cabasho oo ka hadlaya xadgudubyada ay xukuumadda Itoobiya u gaysato dadwaynaha Ogaadeenya iyo sida loogu baahan yahay in beesha caalamku tallaabo uga qaado, gaar ahaan Koonfur Afrika oo lagu tiriyo dalalka difaaca xuquuqda shucuubta dulman.
Isla maalintii jimcaha ahayd ee bisha July 20, 2007 waxaa magaalada Stockholm ee carriga Swedan lagu qabtay bannaanbax wayn oo ay soo qabanqaabisay Jaaliyadda Ogaadeenya ee dalka Swedan. Bannaanbaxayaasha ayaa goobtii bannaanbaxu ka dhacayay ku qaybiyay qoraal cabasho ah oo muujinaya denbiyada bani�aadamnimada ka dhanka ah ee xukuumadda Itoobiya ka gasho dadwaynaha Ogaadeenya. Qoraalkan cabashada ah ayaa sidoo kale loo gudbiyay dowlada Swedan.
Jaaliyadaha Ogaadeenya ayaa toddobaadyadii denbe oo dhan dhigayay bannaanbaxyo ay ku muujinayaan sida ayna raalli uga ahayn dhibaatooyinka ay Itoobiya u gaysanayso dadwaynaha iyo xasuuqa aan aaba-yeelka lahayn ee ciidammada Itoobiya ka wadaan Ogaadeenya.